जेक गोलेहालको व्यक्तिगत जीवन 2016 मा
जेक गिलनहाल 2016 मा सबै उस्तै प्रतिष्ठित स्नातक छ। यहूदी र स्विडिश जडहरू, रूसबाट सन्तानहरूको सन्तान र स्वीडेनका अरिस्टोक्रेटहरूसँग सुन्दर, राम्ररी, आफ्नो आमाबाबुको जोसको कारणले, चलचित्र-ओलिम्पसमा ब्लबबेर्न गर्नुअघि जीवनको कठोर विद्यालयको माध्यमबाट जान्छ। तर यो धन्यवाद, उहाँ एक हुनुभयो जसको बारे मा धेरै केटीहरु आफ्नो सपना मा सपना देख्छन्, र त्यसैले जेक ग्येलहल को व्यक्तिगत जीवन मा रुचि 2016 मा बनी रहयो।
अभिनेता जेक ग्येलहल: सडक सेक्स प्रतीक
Seductive अभिनेता जेक Gyllenal आफ्नो दोस्रो चित्रकारी "डोनी डार्को" संग पहिले देखि नै प्रकट हुन्छ, पछि उहाँ दर्शकहरूको सफलता र प्रेमको साथ आउनुहुन्छ। अद्भुत आँखाहरु र एक घुसपैठ देखो संग एक महिमा मकाउ को नजर मा चकित नहीं हुनेछ! र त्यसपछि त्यहाँ ब्रोकबेक पर्वतको लागि ओस्कर छ ... यो चलचित्रले मूर्तिमा परिणत गर्यो!
र उपन्यासहरू सारिएको थियो। पहिले नै सन् 2006 मा, म्याक पत्रिकाको अनुसार, जेकले विश्वको सबैभन्दा सुन्दर व्यक्तिको TOP-50 भित्र प्रवेश गर्यो र हलिवुडको सेक्स प्रतीकको रूपमा मान्यता पाए। यद्यपि, उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवन फैलाउने चाहँदैनन्।
पहिलो, जेक गिललेहाले अभिनेत्री किर्तिन डन्स्टसँग भेट्थे, तर धेरै वर्ष पछि गएकी थिइन, तर उनी आफ्नो पत्नी बनेनन्। उपन्यास समाप्त भएको छ। अलास!
अर्को "दिल का महिला" रेज वेर्सपोन थियो। तिनीहरू चलचित्रको "सेट" संस्करणमा भेटिए। यो एक सुन्दर कथा थियो, एकदम लामो सम्बन्ध थियो, जसको अन्तले जेक धेरै गाह्रो भयो।
घनिष्ठ सम्बन्धहरूको विक्री
जेक "घातक" महिलाहरूको उपन्यासहरूमा। "सपनेल्यान्ड" को सबै भन्दा सेक्सी र सुन्दर महिलाहरु!
2010 मा सबैजना जेक गोलेहाल र उनको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा कुरा गर्दै थिए, विशेष गरी युवा सुन्दरता एनी हथवेसँग सम्बन्धको बारेमा। फिल्म "प्रेम र अन्य औषधिहरू", स्याउ, समुद्र - को सेट मा एक फ्रिक दृश्यहरूको एक ठूलो संख्या यो सबै सकेन तर नयाँ सम्बन्धको उद्भव लाई प्रभावित गर्न सकेन। दम्पतीले साहसी भई मनोरञ्जन साप्ताहिकको आवरणको लागि तारा चिन्ह लगाए, आफ्नै मनमा मात्र चासो राख्नु भन्दा।
अलास! एक धेरै छोटो समय बित्यो र अभिनेता आफ्नो रिश्तेदारों को एक नयाँ "महिला को दिल" - देश गायक टेलर स्विफ्ट को पेश गरे। एक धेरै जवान नयाँ जुनसुकै ध्यान र हेरचाह चाहिन्छ। "शायद त्यो वास्तवमा के छ उहाँलाई सूट," प्रशंसकहरूलाई सोचा? ज्याक खुसी थियो! सबैलाई खुशी थियो जब राहेल म्याकडम्स क्षितिजमा, उनको अर्को साथी र अर्को ठूलो प्रेममा देखा पर्यो। अनि नेटली पोर्तम्यान र एलिसा मिलरसँग उपन्यासहरू थिए।
जेक ग्येलहल को नयाँ प्यार
तर अहिले सबै कुरा परिवर्तन भएको छ। अष्ट्रेलियाका 24 वर्षीया अभिनेत्री मार्गा रोबी, यो सर्दमा हाम्रो नायकको हातमा रहेको युरोपमा सबैभन्दा महँगो स्की रिजोर्टहरुमा देखियो। न केवल त्यो एक चालाक र सुन्दर महिला हो, त्यो पनि एक भाग्यशाली महिला हो! आखिर, यो उनको औंला थियो कि पत्रकारहरूले "indiscreet" रिंग देखाए र तुरुन्तै सुरु गरेन - त्यो थिएनन? यो फिल्मको "फोकस" को अभिनेता मध्ये एक संग उनको उपन्यास को बारेमा यो गपशप थियो, तर शायद यो सिर्फ अफवाह छ? जवान महिला उत्कृष्ट छ, र यद्यपि उनले दावी गर्छन् कि उनी आफ्ना सँगी अभिनेताहरूको बीचमा "दोस्रो आधा" खोज्ने छैनन्, सोच्नका लागि उनीहरूले मात्र चालाक छ भन्ने सोचिरहेका छन्।
दुई वर्षमा पहिलो पटक टेलर स्विफ्ट प्रकाशित गरियो
कलाकार कार्टूनहरूसँग प्रसिद्ध क्यारेक्टरहरू आकर्षित गर्छन्, र तपाईंले उनीहरूको आँखाबाट आँसु पुछिदिनुहुन्न!
तथापि, अभिनेता अलगावले सबै कुरालाई अस्वीकार गर्दछ, र हामी अझै पनि अनुमान लगाउनु पर्छ जब उनको अर्को मित्र जेक गौलेहाल देखा पर्नेछ, र उनको भविष्यको पत्नी के हुनु पर्छ के हो। त्यो एक हलीवुड दिवा बन्न सक्छ, वा के उनले आफ्नो जीवन एक मामूली केटी संग, घर को अभिभावक बन्न सक्छ?
एक दिनमा स्टीफन टायलर र जो पेरी आमाबाबु भए
ब्राड पिटले आफ्नो उपस्थितिको साथ सुपरमार्केटका कर्मचारीहरूलाई शोक गर्यो
जॉनी डिप्पले सनसनीखेज जासूसको प्रेमीमेन्टमा नयाँ छविलाई आश्चर्यचकित गर्यो
"अवतार" केट विन्सलेटले भूमिकाको लागि नयाँ शोषणमा निर्णय गर्नेछ
केन्डल जेनर र कारो डिलिनको मोम प्रतियां मामा तुसुदु संग्रहालयमा देखा पर्यो
ट्याब्लोइड स्पोर्ट्स इल्लिस्ट्रेटेड प्रोमो संग्रहको लागि छनोट गरिएको बिकिनी -18 मोडेल प्लसको आकार
तीन दिनको लागि, शिया लाबेउफले उनको सबै चलचित्रहरू समीक्षा गर्नेछ
"धेरै ठूला छाती" आश्चर्यजनक महिला घोटालाको कारण थियो ... संयुक्त राष्ट्रमा
छोराको लागि समय: विक्टोरिया र ब्रुकलिन बेखम डिनर गए
"नमस्ते विश्व": सेरेना विलियम्स र एलेक्सिस ओहानान्डनले नयाँ नवजात छोरीको साथ प्रशंसकको प्रस्तुती गरे
जेनिफर लोपेज र एलेक्स रोड्रिउज: नयाँ साक्षात्कारमा ताराको जीवनबाट नयाँ विवरणहरू
डेभिड बेकहम6दिनको लागि डिज्नी महल आफ्नो छोरीको लागि सङ्कलन गर्दै थिए
अमल र जर्ज क्लोनीले पुष्टि गरे कि उनि जुडाइहरूको प्रतीक्षा गर्दैछन्
विगको लागि फोटो शूटमा गीगी हदीड र ज्यान मलिक
आमा दुलही ड्रेस 2014
स्तन कैंसरको लागि हार्मोन थेरेपी
कोट पतन 2017 - नयाँ सिजनमा कस्तो रंग र शैलीहरू फैलाउने हो?
फुजु-ह Hakone-Izu नेशनल पार्क
Drywall वा प्लास्टर?
रातो गोभी राम्रो छ
एलर्जी - लक्षण
फैशनेबल जूता 2012
पुष्प प्रिन्ट 2013 सँग ड्रेसहरू
कपडाहरूमा मेन्टहोल रङ
महिलाको शहरी ब्याकप्याक
के बिरालोको मतलब प्रेम हो?
कुत्ते दस्त - कारणहरू र उपचार
Lilac - उपचार गुणहरू
के एक pleated शिफन स्कर्ट पहनने के साथ?
पोर्टलैक - बीउ बढ्दै जान्छ, हेरविचारका विशेषताहरू
गर्मीमा गर्भवती महिलाहरूको फोटोशूट प्रकृति
ठोस काठबाट आन्तरिक ढोकाहरू